သားသမီးလေးတွေ ဖျားနာတဲ့အခါ ဒီလိုဂရုစိုက်ပေးပါ - Hello Sayarwon
လူဆိုတာက အမြဲကျန်းမာနေမယ့်သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အခန့်မသင့်တာကြောင့်လည်းဖျားနာနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် လက်ခံဖို့တော့ခက်တယ်နော်။ ကိုယ်တိုင်ဖျားလိုက်လို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတစ်ဦးဦးများဖျားရင်ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်လိုက်ချင်တော့တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ဖူးလား။ ချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးဖျားတဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်ပေးရမှန်းမသိဖြစ်နေသူတွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးထဲကနေ သတင်းကောင်းပါး ပါရစေနော်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ – ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူ တစ်ဦးဦးဖျားနာတဲ့အခါ အရင်ဆုံးဂရုစိုက်ရမှာက ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာနေအောင်နေဖို့ပါ။ နည်းနည်းများထူးဆန်းသွားလား။နေမကောင်းတဲ့သူကိုပြုစုဖို့မပြောဘဲ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုယ်ဂရုစိုက်ပါပြောလိုက်လို့။နေမကောင်းတဲ့သူကိုပြုစုပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာနေမှဖြစ်မှာလေ။ ဒါမှနေရေးထိုင်ရေး စားရေးသောက်ရေးက စလို့ဆေးတိုက်တာဆေးခန်းပို့တာအထိ အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ပေးနိုင်မှာပါ။
နေမကောင်းတဲ့သူကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်ထားပေးပါ -အေးဆေးပြီး သက်တောင့်သက်သာအနားယူနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါ။ အိပ်ရာသီးသန့်ခွဲထားပေးတာက အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒါမှနေမကောင်းတဲ့သူကို ကျန်းမာလာစေမှာဖြစ်သလို အခြားမိသားစုဝင်တွေကို အအေးမိဖျားနာကူးစက်မှုကနေ ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။နေမကောင်းတဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာအနားယူတာကမြန်မြန်နလန်ထလာစေဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
နေအိမ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ -နေမကောင်းတဲ့လူနာကိုပြုစုရတာနဲ့တင် အလုပ်ရှုပ်နေမှာဆိုပေမယ့်နေမကောင်းတဲ့သူက ကိုယ်ခံအားနည်းနေတာကြောင့်နောက်ထပ် အပိုဆုရောဂါတွေဝင်မလာအောင် အိမ်သန့်ရှင်းရေးကိုသေသေချာချာလုပ်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ရောဂါပိုးတွေ ကပ်ငြိနေနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသေချာပိုးသတ်သန့်စင်ပေးပါ။နေအိမ်ကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ထားပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
အရည်များများသောက်ပါ -နေမကောင်းတဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်မှာရေဓါတ်ပိုမိုဖြည့်တင်းဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဘာမှမစားချင်မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှာရေများများသောက်ပေးပါ။ အခြားစွပ်ပြုတ်နဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေသာက်သုံးပေးလို့လည်းရပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ခံခိုင်းပါ – ဒါကလည်း အဖျားကျစေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ရေနွေးကို ခပ်နွေးနွေးအချိန်မှာ အဝကျယ်ဇလုံထဲကို ထည့်ပြီးရေနွေးငွေ့ခံခိုင်းပေးပါ။ချွေးလေးစို့လာတဲ့အထိလုပ်ပေးပါ။
ချောင်းဆိုး၊နှာချေတဲ့အခါ တစ်သျှူးသုံးခိုင်းပါ -ချောင်းဆိုးနှာချေတဲ့အခါပြင်ပကိုရောဂါပိုးတွေကူးစက်တာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ တစ်သျှူးအသုံးပြုခိုင်းပေးပါ။ ဖျားနေသူကိုယ်တိုင်အတွက်ရော အခြားမိသားစုဝင်တွေကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပါ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ပေးပါ -နေမကောင်းလို့ရေမချိုးရဘူးဆိုတိုင်း တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးလုပ်စရာမလိုဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ရေပတ်ဝတ်တိုက်ပေးတာမျိုးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ အရမ်းအဖျားမကြီးဘူးဆိုရင် နှာစေးနှာပိတ်သက်သာစေဖို့ရေနွေးနဲ့ ခပ်မြန်မြန်ရေချိုးပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေမကောင်းပေမယ့်လည်း အစားစားခါနီး၊ အစားစားပြီးချိန်၊ ညစ်ပေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကိုင်တွယ်ထိတွေ့မိတဲ့အခါမျိုးနဲ့ရေအိမ်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ လက်ကိုသေချာသန့်စင်ဆေးကြောပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။
ဆေးတိုက်ပါ -တော်ရုံဖျားနာမှုတွေအတွက်ဆေးဆိုင်တွေမှာဆေးဝယ်ပြီးတိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။ အရမ်းဖျားတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဆေးခန်းသွားပြတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ Nasal Sprayတွေက နှာခေါင်းပိတ်တာ နှာစေးတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ ချွဲတွေကိုပျော်စေပြီး ဖျားနာမှုကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အဖျားသက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကGargle Wash ကိုသုံးပြီး ခံတွင်းနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားတာပါ။ ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုပေးတာကနေမကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ရှုပ်စရာအခြေအနေတစ်ရပ်လို့ခေါ်ရမယ့် လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေနိုင်တာပါ။
အာဟာရပြည့်ဝအောင်ေကျွးမွေးပေးပါ -နေမကောင်းတာက ကိုယ်ခံအားကရောဂါတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်အောင် ကျန်းမာစေဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့အာဟာရဓါတ်တွေမရတာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့်နေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါ အချိုများတာ၊အဆီများတာတွေကိုရှောင်ရှားပေးပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သစ်သီးနဲ့ ပရိုတင်းပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုများများကျွေးပေးပါ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်တွေကို မသောက်ပါစေနဲ့။ အဖျားသက်သာစေနိုင်တဲ့ မီးဖိုချောင်ေဆးဝါးတွေဖြစ်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတို့ပါဝင်တဲ့ ကြက်သားစွပ်ပြုတ်လိုမျိုး အာဟာရဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးပါ။
ချစ်ခင်ရသူတစ်ဦးဦးဖျားရင်ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်နေမယ့် အစား အခုပြောခဲ့တဲ့နည်းလေးတွေသုံးလို့မြန်မြန်ကျန်းမာအောင်ပြုစုပေးလိုက်ပါနော်။ ဖျားနာမှုကင်းကြပါစေကြောင်း…….
10 Tips to Ease Flu Symptomshttps://www.webmd.com/cold-and-flu/coping-with-flu#2 Accessed Date 19 September 2018
Caring For A Flu Patient? How To Stay Healthyhttps://www.huffingtonpost.com/2013/01/20/caring-flu-patient-prevention-tips_n_2505000.html Accessed Date 19 September 2018
Family Care During the Flu Seasonhttps://chealth.canoe.com/healthfeature/gethealthfeature/family-care-during-the-flu-season Accessed Date 19 September 2018
Health Tip: Taking Care of Someone With Fluhttps://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=186030 Accessed Date 19 September 2018